Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. महिनावारी हुँदा के गर्ने के नगर्ने ? – Emountain TV
महिनावारी हुँदा के गर्ने के नगर्ने ?
काठमाडौं, १९ जेठ । शरीरमा भएका रसरागहरूको मात्रामा आउने परिवर्तनका कारण महिनावारी हुने गर्छ । यो एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो, जसले महिला प्रजजन् स्वास्थ्यका लागि परिपक्व भएको संकेत गर्छ । महिनावारीको समयमा महिलामा शारीरिक परिवर्तन देखापर्ने भएकाले आफ्नो स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
महिनावारी हुँदा सरसफाइमा विशेष ध्यान जरुरी छ । यद्यपि, अझै पनि कतिपय ग्रामीण भेगमा महिनावारीको समयमा फोहर कपडा प्रयोगमा ल्याइने गरिन्छ । जस्तासुकै कपडा पनि प्रयोगमा ल्याउनुले विभिन्न समस्या निम्त्याउँछ । यस्ता कारणले गुप्तांगमा संक्रमणको समस्या हुन्छ । महिलामा प्याड प्रयोगबारे सचेतना हुन आवश्यक छ ।
महिनावारीका वेला प्रयोग भएका कपडा ‘सूर्य भगवान्’लाई देखाउनु हुँदैन, पाप लाग्छ भन्ने अन्धविश्वास अझै कायम छ । घाममा राम्ररी नसुकाई कपडा पुनः प्रयोग गर्दा शरीरका भित्री अंगमा संक्रमण हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले, प्याडको सट्टा प्रयोग गरिएका कपडा सफा गरेर घाममा सुकाएर मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ ।
महिनावारीको वेला कतिपयमा रगत कम बग्ने हुँदा उनीहरू लामो समयसम्म एउटै स्यानिटरी प्याड प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो गरेमा संक्रमणको डर हुन्छ । त्यसैले, स्यानिटरी प्याड प्रत्येक चार घन्टामा फेर्नुपर्छ ।
भर्खरै महिनावारी सुरु भएका किशोरीमा आवश्यक पोषणको अभाव हुने गर्छ । त्यसैले यो वेला पर्याप्त मात्रामा पौष्टिक आहार खानुपर्छ । विशेषगरी, अन्डा, माछा–मासु, हरियो सागसब्जी र फलफूल खान आवश्यक छ ।
रक्तअल्पता हुनबाट बच्न नियमित रूपमा आइरन, फोलिक एसिड, भिटामिन आदि खान सकिन्छ ।
महिनावारीको वेला दैनिक जीवनमा आइपर्ने सामान्य काम गर्दा केही फरक पर्दैन । तर, शरीरलाई भारी पर्ने काम भने गर्नुहँुदैन । सामान्य अवस्थाभन्दा यो वेला शरीरमा कमजोरीपन देखापर्ने भएकाले साविकभन्दा बढी आराम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कहिलेकाहीँ महिनावारीमा गडबडी आउँछ । यस्तो प्रायः किशोरावस्थामा हुन्छ । उनीहरूमा शारीरिक परिपक्वता नहुँदा महिनावारी ढिलो–चाँडो हुने गर्छ ।
कतिपय महिलामा त पहिलोपटक महिनावारी भएपछि दुई–चार वर्ष नै हुँदैन । यस्तो अवस्थापछि पनि फेरि नियमित हुन सक्छ । यो सामान्य प्रक्रिया हो, समान्यतया यसले स्वास्थ्यमा केही असर गर्दैन । तर, कतिपय अवस्थामा भने एक्कासि महिनावारीमा गडबडी आउन सक्छ । यसरी घटबड हुनुमा उमेर पनि कारक हो ।
ब्रेनदेखि ओभरीसम्मका मेकानिजम परिपक्व नहुन्जेल महिनावारी नियमित हुँदैन । त्यस्तै, गर्भसँग सम्बन्धित समस्या जस्तै– गर्भपतन, सुत्केरी हुने र सालनालबाट उत्पन्न हुने ट्युमरका कारण पनि महिनावारीमा गडबडी आउन सक्छ ।
परिवार नियोजनका साधनको अनियमित प्रयोग र त्यसको साइड इफेक्टले समेत महिनावारी अनियमित हुन्छ । प्रजनन तथा यौनअंगको संक्रमण, प्रजनन अंगमा हुने ट्युमर तथा हार्मोनल औषधिको प्रयोगले पनि अनियमित हुन्छ ।
लागू औषध दुरुपयोग तथा ओसारपसार नेपालका लागि पनि चुनौतिपुर्ण बन्दै गएको छ: गृहमन्त्री
झापा, धरान र विराटनगरमा डेंगुको प्रकोप
वीर अस्पतालको फार्मेसीमा समेत विरामीले खोजेको औषधी पाइँदैन